Raisul Wasaare Dr, Abiy Ahmed oo ka digay dagaal dhexmara dowladaha Masar iyo Itoobiya. – Xeernews24
Raisul Wasaare Dr, Abiy Ahmed oo ka digay dagaal dhexmara dowladaha Masar iyo Itoobiya.
Ra’isul Wasaaraha Itoobiya Dr.Abiy Axmed ayaa sheegay in dagaal lala galo Masar uusan xal noqoneyn oo loo baahan yahay in wax walba wadahadal lagu dhameeyo, balse haddii ay suurageli weydo dalkiisu uu hayo malaayiin dhalinyara ah oo dagaal geli karta.
Hadalkan ayuu maanta Abiy ka sheegay baarlamaanka dalkiisa iyadoo ay mudanayaasha baarlamaanka ay su’aalo ka weydiiyeen arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka Itoobiya.
Dr. Abiy Axmed oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey xaaladda ka dhex taagan Masar iyo Itoobiya ee la xidhiidha muranka ka dhashay biya xidheenka weyn ee ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile wuxuu sheegay in shacabka Itoobiya aysan dooneyn in waxyeello ay u geystaan shacabka Masar in ay wax taraan mooyee.
“Annaga iyo Masar arrimo siyaasadeed oo aan ka wada hadleyno haba yaraatee ma jiraan. Madaxweyne Sisi dhawaan ayaan wada hadalnay maalmaha so socda barri ama sahan dambe inaan kulanno ayaan rajeeynayaa inaan ka wadahadalno wixii ay dhibsadeen.” ayuu yidhi Abiy Ahmed.
“Dagaalku xal ma aha, dagaalka Masar-na ma anfacayo, Suudaan-na ma anfacayo, innagana nama anfacayo, balse haddii ay arrintu tagto jiritaanka dalka iyo calanka, xataa aniga ayaa galayo dagaalka, waxaana idiin sheegayaa ineysan jirin cid Itoobiya ka hor istaagi karto iney biya xireen dhisato,” ayuu yidhi Ra’isul wasaare Abiy Axmed.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/sisi-and-abye.jpg 538 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-23 00:21:312019-10-23 00:21:31Raisul Wasaare Dr, Abiy Ahmed oo ka digay dagaal dhexmara dowladaha Masar iyo Itoobiya.
Mareynkanka oo madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya inuu ka hadho Kiiska Dacwada... Maamulka Canfarta oo dad Soomaali reer guura ah ka dhigatay hub iyo been dacaayad...